Sawir dhan 600MB "Sphere" oo muujinaya cirka Manhattan | Abuurista khadka tooska ah
Google wuxuu noo ogolaanayaa barnaamijkeeda kamarad si aan u qaadno sawirro taxane ah oo wareegaya hal dhibic. Taasi nooca sawirada waxaa lagu magacaabaa «Sawirrada Sphere» waxayna awood u leeyihiin inay ku soo ururiyaan hal aragti oo dhan aragtida ballaaran ee aan ka yeelan karno cirifka. Xaqiiqdii mar uun ayaad arki doontaa qaar ka soo dhexbaxay shabakad bulsheed oo ay wadaagaan saaxiib ama xubin qoyska ka tirsan.
Hadda waa sawir qaade Dan Piech oo waqtigiisa ku qaatay inuu noo soo bandhigo sawir, kaasoo uu ugu magac daray "Riyooyinka Magaalada New York", by 602 megapixels intaasna waxaa laga sameeyay 189 sawir qaybaha shaqsi ee cirka Manhattan. Isku soo wada duuboo, waxay ku qaadatay 160 saacadood inuu sawir qaadahaani dib ugu abuuro aragtida magaalada New York qaab xiiso leh.
Ujeeddadiisa ugu weyn, sida uu sheegayo, waxay ahayd dib u soo noolee tamarta firfircoon ee ka soo baxda magaalada sida New York oo ah sawir gaadhay tiro intaa leeg oo megapixels ah. Sidaa darteed, waxaa loo beddelay sawir xallinta heer sare ah oo ka mid ah magaalooyinka ugu astaanta badan meerahan.
Ha waxay qaadatay hal sano in la helo qalinjabinta midabka loo baahday in hal sawir la galiyo waxa qofku dareemi karo haddii uu hareeraha ka fiiriyo aragti ballaadhan oo ku saabsan jawiga magaaladan oo kale. Sawir aad u hodan ku ah faahfaahinta, iyada oo ay ugu wacan tahay culeyskiisa weyn ee megapixels, iyo kaas oo laga heli karo Dhismaha Boqortooyada Boqortooyada.
Waxa uu ahaa waxaa loo isticmaalay wadar dhan 9,563 megapixels xogta sawirka ugu dambeeya ee 602 megapixels. Sawirkan oo loogu magac daray "Riyooyinka Magaalada New York" waa la balaadhin karaa ilaa tobaneeyo mitir murabac si loo ilaaliyo qaraarkiisa sare. HDR iyo farsamooyin kale ayaa loo isticmaalay si sawirradan loogu daabacay baaxad weyn oo saxsan.
Waxaad heli kartaa daabacaadda a laga soo xigtay. Su Facebook iyo iyada Instagram. Kaliya afar usbuuc ka hor waxaan ka wada hadalnay shaqo kale oo weyn oo uu qaaday sawir qaade, in kasta oo leh dareen kale oo ku saabsan magaalada New York; magaalo gaar u ah daraasaddan oo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » 160 saacadood si loo abuuro muuqaalkan 600 megapixel ee cirka Manhattan